WAR CUSUB:Farmaajo oo Axmed Madoobe ka Codsaday in uu Magaalada Muqdisho uu Saaka. | jubbaland news
WAR CUSUB:Farmaajo oo Axmed Madoobe ka Codsaday in uu Magaalada Muqdisho uu Saaka.
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in Madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsanaa magaaladaasi ay si deg deg ah u imaanayaan magaalada Muqdisho.
Shanta Madaxweyne goboleed ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa soo gabo gabeeyay shirkii ay lahaayeen, waxaana la filayaa saacadaha soo aadan in shirka laga soo saaro War Murtoyeed ay isku raacsan yihiin.
Ilo lku dhaw dhaw Madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu lasoo hadlay qaar kamid ah Madaxda maamul goboleedyada kana codsaday in Muqdidsho deg deg u yimaadaan si uu ula hadlo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kala hadli doona Madaxda maamul goboleedyada oo hada u muuqda kuwa dantooda isku baheestay shirka ay ku yeesheen magaalada Kismaayo iyo go;aanada ay soo saareen .
Sida aan Wararka ku helany Madaxda shanta Maamul goboleed ee Kismaayo ku sugan ayaa wali ka arinsanaya sida ay ka yeelanayaan baaqa Madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan in ay yimaadaan Muqdisho lana kulmaan.
Qaar kamid ah Madaxda maamul goboleedyada ayaa wararku sheegayaan in ay ka biyo diidsan yihiin in ay tagaan magaalada Muqdisho, waxa ayna ka baqayaan in lakala fur furo oo go’aanada ay soo saareen noqdaan kuwa fashilmay.
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo u muuqda mid doonaya in uu dhax dhaxaadiyo labada dhinac ayaa ka codsaday Madaxda diidan in ay tagaan Muqdisho , waxa uuna wadaa dadaal uu ku doonayo sidii dhamaan madaxda u tagi lahaayeen Muqdisho.
War Murtiyeedka la filayo in uu kasoo baxao Shirka Kismaayo ayaa waxa ku jira qodobo aysan dowlada Federaalka Soomaaliya ku qanacsaneyn, lamana oga in dowlada u aqbali doonto rabitaanka Madaxda maamul goboleedyada dalka.